ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၃၀; ၉၂ နှစ် အကြာက (၁၉၃၀)
ဘရာဇီး (5 titles)
၂၀၂၂ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲများ
ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား 1978
ပြီးခဲ့သည့် ၂၁ ကြိမ်တွင် နိုင်ငံ ၈ နိုင်ငံမှ ဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။ ထိုနိုင်ငံများအနက် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ ၅ ကြိမ်တိုင်တိုင် ချမ်ပီယံဆု ရခဲ့ပြီး အကြိမ်တိုင်းတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့သည့် နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ အခြားအနိုင်ရရှိအသင်းများမှာ အီတလီနိုင်ငံနှင့် ဂျာမနီတို့ဖြစ်ကြ၍ လေးကြိမ်ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး၊ ဥရုဂွေးနှင့် အာဂျင်တီးနား၊ ပြင်သစ်တို့မှာ ၂ ကြိမ်စီ၊ အင်္ဂလန်နှင့် စပန်တို့က ၁ ကြိမ်စီ အသီးသီးရခဲ့ဖူးသည်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲသည်လည်း ကမ္ဘာတဝှမ်း လူကြည့်အများဆုံး အားကစားပွဲ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဂျာမနီတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲကို ပရိသတ်ပေါင်း ၇၁၅ သန်းခန့် ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။  ၂၀၁၀ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့အထိ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ၎င်းပွဲစဉ်တွင် စပိန်နိုင်ငံမှ ဗိုလ်စွဲအနိုင်ရရှိခဲ့လေသည်။။ ၂၀၁၄ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားကိုမူ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဂျာမဏီနိုင်ငံက အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံက အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲများကို နိုင်ငံ ၁၇ နိုင်ငံတို့က အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပပေးခဲ့ရာ ဘရာဇီး၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ မက္ကဆီကို တို့က နှစ်ကြိမ်စီ၊ ဥရုဂွေး၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဆွီဒင်၊ ချီလီ၊ အင်္ဂလန်၊ အာဂျင်တီးနား၊ စပိန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျပန်-တောင်ကိုးရီးယား (ပူးတွဲ)၊ တောင်အာဖရိက၊ ရုရှားတို့က တစ်ကြိမ်စီ အသီးသီး လက်ခံကျင်းပခဲ့ကြသည်။ လာမည့် ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကာတာနိုင်ငံက လက်ခံ၍ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၆ တွင် ကနေဒါ-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု-မက္ကဆီကို တို့က ပူးတွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ မက္ကဆီကိုအသင်းသည် ကမ္ဘာ့ဖလားကို သုံးကြိမ်လက်ခံကျင်းပမည့် ဝိသေသကို ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်၏ ။
↑ 2006 FIFA World Cup broadcast wider, longer and farther than ever before Archived 24 November 2009 at WebCite, FIFA.com. Retrieved on October 11, 2009.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖီဖာ_ကမ္ဘာ့ဖလား&oldid=725851" မှ ရယူရန်
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။